“Mandoro boky sy mandevina mpampianatra ambony”: fandoroamboky miteraka fahatezerana ao amin’ny media sosialy shinoa · Global Voices teny Malagasy
"Asehon'ny hetsika ny fanatanterahan'ny mpitantana AKS eny ifotony ny jadona"
Voadika ny 17 Desambra 2019 7:02 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Italiano, Ελληνικά, 日本語, Español, 繁體中文, English
Sary niely haingana tao amin'ny media sosialy shinoa.
Niteraka trerona tao amin'ny media sosialy shinoa, hatramin'ny 8 desambra lasa teo, ny sary iray mampiseho ireo ekipa mpikambana ao amin'ny tranomboky iray ao Gansu.
Nivoaka tao amin'ny tranonkalan'ny tranombokin'ny kaominina Zhengyuan ao amin'ny faritanin'i Gansu ny sary tamin'ny 23 Oktobra ary nahitana filazana fa ny hetsika dia “mampihatra feno ny anjara toerana lehibe ananan'ny tranomboky amin'ny fampielezana ny ideolojia amin'ny fiarahamonina”. Nivoaka voalohany sy nandehandeha tamin'ny sehatra media sosialy shinoa ny vaovao, ao anatin'izany ny WeChat sy Weibo ary taty aoriana nalain'ireo seha-baovao shinoa ampitandranomasina mialoha ny nianahany haingana an-tserasera. Nesorina ny pejin'ny tranomboky rehefa betsaka ireo fanehoan-kevitra nitsikera.
Izao fandoroam-boky izao dia setriny avy amin'ireo lehiben'antoko eny ifotony amin'ny tondrozotra ara-pitantanam-panjakana navoakan'ny Minisiteran'ny Fanabeazana tamin'ny 15 Oktobra. Nangatahan'ny minisitera ny tranombokin'ny sekoly fanabeazana fototra sy ambaratonga voalohany rehetra fa tokony avahany ireo boky manimba ny tombontsoam-pirenena, manimba ny kolontsaina shinoa ary manimba ny soatoavina fototra sosialista.
Efa fenitra ny tolona ara-potokevitra ao Shina ary mahafantatra ny rehetra fa mandalo sivana avokoa ny filma, boky, TV drama, vaovao ary torohay rehetra. Na izany aza, ilay hetsika mandoro boky ankarihary eo anoloan'ny tranomboky dia mampahatsiahy amin'ny vahoaka ny hetsika fahiny tsimifaditrovana “mandoro boky sy mandevina mpampianatra ambony” nandritra ny fitohizan-taranaka Qin.
Eny fa na dia teo amin'ireo seha-baovao miankina amin'ny fanjakana shinoa aza dia niteraka fifanoheran-kevitra izao hetsika fandoroana boky izao. Nisy lahatsoratra fanehoan-kevitra iray mandeha ao amin'ny Beijing News [Vaovaon'i Beijing] miantso ny hanaovana famotorana amin'izao toe-javatra izao amin'ny filazana fa “Ny fomba hikirakiran'ny fiarahamonina ny boky no fihetsiny manoloana ny fahalalàna sy ny sivilizasiona.” Saingy najanona haingana ny fanehoan-kevitra ary nesorina an-tserasera rehefa nampanginina ny adihevitra mifandraika taminy.
Mandray izao toe-javatra izao ho marika hafa amin'ny tsirefesimandidy shinoa ny ankamaroan'ireo fanehoan-kevitra ivelan'i Shina. Ohatra, Naneho ny heviny tao amin'ny Twitter ny Senateran'i Etazonia Marco Rubio:
Tsy misy zavatra milaza tsirefesimandidy tahaka ilay lamaody tsara fahiny mandoro boky.
Ho an'ireo manampahaizana miaina ao Shina, lalina kokoa ny hetsika ara-politika fandoroana araka izay asehony amin'ny tsy fisalasalàna nataon'ny sampan'ny Antoko Komonista Shinoa mandray ny jadona. Mijery ny sariohatry ny fahaombiazana ara-politika ilay Shinoa mpanora-gazety Micheal Anti:
Ahoana moa no iresahan'ny tanora ny fiantraikany ara-tontolo iainana fotsiny amin'ny fandoroana boky? Fa tsy mbola nahafantatra ny sariohatra ara-tantera navelan'ny “fandoroana boky sy fandevenana mpampianatra ambony” ve ry zareo? Na oviana na oviana ny filma no te-hamaripaitra mpanao didijadona iray, dia hivoaka ny fandoroana boky ary hahitana fahatezerana, ranomaso ary fahadisoam-panantenana amin'ireo mpijery. Tsy endrika famoretana ny fanehoan-kevitra ihany ny fandoroana boky. Zavabita ara-politika izany ho an'ny olona mba hananana fijery tsara ao amin'io.
@jiongnasen niresaka ny fiantraikany ara-politika amin'izany hetsika izany:
Mazava loatra fa tsy afa-mampihena ny fahalalaham-pisainana ry zareo amin'ny fandoroana boky. Tahaka ny tsy ahafahan'ny Manda Aroafo manakana ny olona tsy hitsidika ny aterineto malalaka. Saingy tsy sangisangy. Tsy ny hametraka ny olona 100% ho ao ambany fanarahamaso no tanjon'ny fanarahamaso [fifehezana] ny fisainana. Rehefa mahafehy olona betsabetsaka amin'ny vahoaka ry zareo, dia afa-mitory na mamono olona vitsy an'isa. Ny Antoko Komonista Shinoa [AKS] no manana ny teny amin'ny hoe tompontany (midadasika) na kapitalista na Kavanana na Maitso ny “vitsy an'isa”.
Niverimberina tao amin'ny tantaram-pirenena shinoa ny hetsika “fandoroana boky sy fandevenana mpampianatra ambony” ary olona maro no manombana mialoha ny fiavian'ny andro maizina:
Nanomboka tamin'ny Fitohizan-taranaka Qin ny “fandoroana boky sy fandevenana mpampianatra ambony”. [Amin'ny vanim-potoana ankehitriny amin'ny tantaram-pirenena shinoa] nanenjehana manampahaizana an'arivony ny fanentanana anti-kavananista. Ihomehezan'i Mao [ireo mpitarika AKS taloha] ny Amperora Qin amin'ny fandevenana manampahaizana ambony 460, mihoatra ny 46000 no vitan'ny fanentanana anti-kavananista [naotin'ny tonia: mihoatra ny dimy hetsy ny manampahaizana nenjehina nandritra ny fanentanana anti-kavananista]. Ny andiany fahatelo amin'izany dia ny Revolisiona Ara-kolontsaina, tsy voaisa ireo manampahaizana nenjehina. Ankehitriny i Bun Xi [naotin'ny tonia: ny filoha shinoa Xi Jinping] no ao ambadiky ny andiany vaovao amin'ny “fandoroana boky sy fandevenana mpampianatra ambony”. Tsy nobeazina ara-kolontsaina io olona io ary manaraka akaiky an'i Mao Zedong. Mampalahelo ny mahita azy mifehy an'i Shina. Hitondra voina ho an'ny firenena io.